आज उषा खड्गीको जन्म दिन हो , हामी सबै मिलेर जन्मदिनको शुभकामना दियौ ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/आज उषा खड्गीको जन्म दिन हो , हामी सबै मिलेर जन्मदिनको शुभकामना दियौ !
काठमाडौ, २६ असार । कोरोना फैलने जोखिमका कारण कलाकारहरु अहिले घरमै छन् । सामाजिक काममा सहभागी हुन पाएका छैनन् । विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि साथीहरुलाई बोलाउन पाएका छैनन् परिवारका सदस्यका साथमा यस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । हालै मात्र पुर्व मिस नेपाल उषा खड्गीले जन्मदिन मनाएकी छिन् । उषाले आफैले चलाएको बुटिकमा जन्मदिन मनाएकी हुन् । उषा अहिलेसम्मकै सुन्दर मिस नेपाल मानिन्छिन् ।
सेलिब्रिटीहरुबचि आरोप प्रत्यारोपमा लागिरहँदा उनी भने आफ्नो व्यवसायमा व्यस्त छिन् । बाहिर खुलेर कुरा नगर्ने उषा विवादमा आउँदिनन् । उनको जन्मदिनमा परिवार र साथीहरुको सामान्य उपस्थिती रहेको थियो ।
उनले कति औ जन्मदिन भने खुलाएकी छैनन् । आज उनले इन्स्टाग्राममार्फत शुभकामना दिने सबैलाई धन्यवाद दिएकी छिन् ।लकडाउनका कारण घरमै फुर्सदिला भएका कलाकारहरु सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिब्यक्तिका कारण विवादमा आउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा फिल्म निर्माता भुवन केसी र नायीका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको विवादले सामाजिक सञ्जालमा तातेको छ ।
केही समय अघि एक अन्तरवार्ताका क्रममा नायीका पुजा शर्माले दिएको अभिब्यक्तिले पनि सामाजिक सञ्जालमा ठाउँ पायो । उनलाई राजनीतिका बारेमा केही पनि जानकारी नभएको भन्दै टिप्पणी गरिएको थियो । अन्तरवार्ताका क्रममा उनलाई प्रधानमन्त्रीको नाम समेत नआएपछि टिप्पणी भएको हो
यस अघि पुजा र शुष्मा कार्कीबीचको विवादले पनि सामाजिक सञ्जालमा ठाउँ पायो । अहिले त्यो चर्चा भने सेलाएको छ । यस्ता विवादित कुराहरुवाट टाढै रहने उषा भने ब्यक्तिगत जिवनमा निकै खुसी देखिन्छिन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कलाकारहरुसंग कुराकानी गरिरहेकी हुन्छिन् । उनको लाइभ कार्यक्रम चर्चित छ ।
नायिका प्रियङ्का कार्किको गर्भ बारे खुल्यो फरक रहस्य ,बिवादै बिवादमा प्रियङ्का (भिडियो सहित )